About the Program — Ohio Department of Job and Family Services U bood waxyaabaha ugu waaweyn
Ku saabsan barnaamijka
Waaxda Dhexe ee Diiwaangelinta Aabannimada (CPR) waa barnaamij Xafiiska Taageerada Ilmaha ee Waaxda Adeegyada Shaqada iyo Qoyska ee Ohio, oo bixinaya aasaasidda xarumaha dibadda ah ee aabbanimada, waxbarashada, tababbarka, hagidda, qiimeynta iyo caawimaadda farsamooyinka ku dhallidda isbitaallada, diiwaangeliyaasha deegaanka, xafiisyada fulinta ee taageerada caruurta, maxkamadaha, iskaashatayaasha bulshada iyo waaliddiinta aan guursan. Barnaamijku diiraddiisu ayaa ah in la dhiiraigeliyo aasaasidda aabbanimada ikhtiyaariga ah si loo hubiyo in carruurta Ohio ay leeyihiin aabeyaal si sharci ah loo aqoonsan yahay iyo in dhammaan carruurta u baahan yihiin taageerada dhaqaalaha iyo dareenka ooyna u qalmaan.
Barnaamijka waxaa abuuray Gobolka Ohio, iyadoo ka jawaabeysa tilmaamaha federaalka, si loogu sahlo waalidiinta inay qiraan aabbanimada ikhtiyaariga ah iyadoo la isticmaalayo hababka fudud ee soo gelidda isbitaalada wakhtiga dhalashada. Waalidiintu waxay sidoo kale si iskood ah u aasaasi karaan aabonnimo, ka dib markii ay ka baxaan isbitaalka iyagoo u tagaya diiwaangeliyaha degaankooda (waaxda caafimaadka) ama xafiiska CSEA-da.
Haddii ay ku aasaasaan isbitaalka ama ka dib goobta diiwaangeliyaha deegaanka ama xafiiska CSEA-da, waalidka waxay si ikhtiyaari ah u aasaasi karaan aabanimada iyagoo buuxinaya Qirashada Dhaarta Aabannimada(JFS 07038). CPR-ka iyo CSEA-da ayaa waxay sidoo kale xog iyo dhaqaale siiyaan waaliddiinta aan guursan oo loo loogu talagalay arrimaha aabanimada ee adag.
Marka lagu daro gacan ka geysashada xarumaha dhalmada iyo hay’adaha gobolka, CPR-ku waxay kaashadaan lamaanayaal badan oo bulshada ah si ay u gaaraan waaliddiin badan aan la guursan sida ugu macquulsan.
Halkan ayaa ah qaar ka mid ah iskaashatadayada
XafiisyadaOB/GYN, umulisooyinka iyo kalkaalisada
Parish Health Units, Xarumaha Caafimaadka Bulshada iyo Xafiiska WIC
Barnaamijka Iskaashiga Qoyska ee kalkaaliyaha
Haddii aad xiiseyneyso inaad la shaqeysid CPR, fadlan kala xiriir CPR lambarka ee halkan 1-888-810-OHIO (6446).
“Waa maxay isbeddelka ee uu aabuhu sameeyo?”